Unfpa qna mm by linn - issuu
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ၂၀၁၄ခုနှစ်၊ လူဦးရေနှင့်အိမ်အကြောင်းအရာ သန်းခေါင်စာရင်း
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အား ဦးစီးဌာန ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေရန်ပုံငွေအဖွဲ့၏ နည်းပညာပံ့ပိုးမှု နိုဝင်ဘာလ ၂၀၁၃ခုနှစ်
နိ ဒါန်းပြည်သူလူထုဟာ မေးခွန်းများ
စမ်းသပ်သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူခဲ့စဉ် အတွေ့အကြုံများနဲ့ ဒေသအသီးသီးမှာရှိတဲ့ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့စဉ် အတွေ့အကြုံများကို အခြေခံပြီး အောက်ပါ မေးခွန်းများနဲ့ အဖြေများကို ပြုစုခဲ့ပါတယ်။ မေးခွန်းနှင့်အဖြေ အကျဉ်းချုပ်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည် ၁။ လူဦးရေသန်းခေါင်စာရင်း ဆိုတာဘာလဲ? လူဦးရေသန်းခေါင်စာရင်းတစ်ခုဆိုတာ သတ်မှတ်ချိန် တစ်ချိန်မှာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးကို လွှမ်ခြုံပြီး လျှပ်တစ်ပြက် ဓါတ်ပုံရိုက်ယူလိုက်ခြင်းပင် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကနေ နိုင်ငံအတွင်းမှာ လူဦးရေ ဘယ်လောက်ရှိနေသလဲ၊ ကျား/မ အလိုက်၊ အသက်အပိုင်းအခြား အလိုက် လူဦးရေ၊ နေထိုင်မှု အခြေအနေများ၊ အခြေခံ ဝန်ဆောင်မှုများ လက်လှမ်းမီရရှိမှု စသည်တို့ကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအချက်အလက်တွေဟာ အားလုံးအတွက် အရေးကြီးပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပြည်လုံးကျွတ် သန်းခေါင်စာရင်းကြီးကို ၂၀၁၄ ခုနှစ် မတ်လ/ဧပြီလမှာ စတင်ပါလိမ့်မယ်။ သန်းခေါင်စာရင်း ရည်ညွှန်းချိန်ကတော့ ၂၀၁၄ ခုနှစ် မတ်လ (၂၉) ရက်နေ့ည သန်းခေါင်ယံ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂။ သန်းခေါင်စာရင်းကို မည်သူတွေက တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပါသလဲ? လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်
က သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူရေး လုပ်ငန်းတွေကို တာဝန်ယူ စီမံဆောင်ရွက် နေပါတယ်။ ဤဌာနက သန်းခေါင်စာရင်းဥပဒေနဲ့အညီ သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူဖို့နဲ့ တိကျမှန်ကန်တဲ့ အချက်အလက်များကို အချိန်နဲ့ တစ်ပြေးညီ ရရှိထုတ်ပြန်ပေးဖို့ တာဝန်ယူပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၃။ ဘာကြောင့် သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ဖို့ လိုပါသလဲ? နုငိင်အံတွင်း နေထုငြိ် ကတဲ့ လူဦး ရေ (သုမ့ိ ဟုတ)် အုပခ်ျုပ်မှေုဒသအလုကိရ်ှိ လူဦး ရေ၊ နေထုငိမ်ှု အခြေအနေနဲ့ အခြေခံ ဝန်ဆောင်မမျှုား လက်လမှ်း မီရရိမှု အခြေအနေ အတိအကျကို သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယြူ ခင်းဖြင်သ့ာ ရရှနိငို ပ်ါတယ်။ အဲဒအီချက်အလက်တွေကို အသံုး ပြုပြီး နိငုင်ေံတ်ာအစိုး ရကပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အစိုး ရမဟုတတ့်ဲ ပြင်ပပုဂလ္ဂကိအဖွအ့ဲ စည်းတွေကပဲ ဖြစ်ဖြစ် စီမကံနိ်း တွေ ရေးဆွနဲငို မ်ှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသန်းခေါင်စာရင်းမှ ရရှမိဲ့ အချက်အလက်တွေကို ကြည်ြ့ ခင်းဖြင့် ပြည်သလူထူမှုာ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးစောင်ရှေ့ာက်မ၊ှု အိမရ်ာနေရာချထားရေးနဲ့ သယ်ယပူေ့ို ဆာင်ရေး ကဏ္ဍ တွေမှာ အရင်းအမြစ်တွေ ဘယ်လောက်လေို နသလဲ ဆုတိာကို စီမကံနိ်း ရေးဆွတဲသ့ဲေူ တွ သိရလှိာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ၂၀၁၄ ခုနစှ် မတ်လ (၃၀) ရက်နေ့မှာ စတင်မယ့် သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယေူရး လုပင်န်းမှာ မြန်မာနိငုင်တံငွ် နေထိငုသ်အူားလံုး ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရကွဖ့်ို အထူးအရေးကြီးပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ၂၀၁၄ခုနှစ်၊ လူဦးရေနှင့်အိမ်အကြောင်းအရာ သန်းခေါင်စာရင်း သိကောင်းစရာများ
၄။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နောက်ဆုံးသန်းခေါင်စာရင်းကို ဘယ်တုန်းက ကောက်ခဲ့ပါသလဲ? မြန်မာနိုင်ငံမှာ
သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူပြီး နှစ်ပေါင်း (၃၀)ကြာမှ ၂၀၁၄ ခုနှစ် သန်းခေါင်စာရင်းကို ကောက်ယူမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အနာဂတ်အတွက် အလွန်ဘဲအရေးကြီးပါတယ်။ ၅။ သန်းခေါင်စာရင်းတစ်ခုကို ဘယ်လောက်တစ်ခါ ကောက်သင့်ပါသလဲ? နိုင်ငံတော်တော်များများမှာ သန်းခေါင်စာရင်းများကို (၁၀)နှစ် တစ်ကြိမ် နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်းအတိုင်း ကောက်ယူလေ့ ရှိကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်းနဲ့အညီ (၁၀) နှစ်တစ်ကြိမ် သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ၆။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်သန်းခေါင်စာရင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့ ဘာကြောင့် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့ လိုအပ်ပါသလဲ? သန်းခေါင် စာရင်းက ရတဲ့အ ချက် အ လက်တွေ ကို စီ မံကိန်း တွေ ရေးဆွဲဖို့  အ တွ က်အသုံး ပြုမှာဖြစ် ပါတယ် ။ သင် တို့  ရဲ့ ပါဝင် မှုမရရင် ကောက် ယူရ ရှိတဲ့ အချက် အ လက်တွေ ဟာမြန် မာနိုင်ငံရဲ့ အမှ န်တ ကယ် လူ ဦး ရေကိုဖော်ြ ပနိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။ နိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသူများ၊ သုတေသနအဖွဲ့အစည်းများနဲ့ ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍတွေ အနေနဲ့  ထိရောက် မှုရှိ တဲ့ အစီ အ စဉ် နဲ့ မူ ဝါဒတွေ ရေးဆွဲဖို့  အ တွ က်တိ ကျမှ န်က န် တဲ့ အချက် အ လက်တွေ လိုအ ပ် ပါတယ် ။ သန်းခေါင်စာရင်းကသာ သင်တို့ရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို နိုင်ငံတော်စီမံကိန်းတွေမှာ ထည့်သွင်းရေးဆွဲနိုင်မှာ ဖြစ် ပါတယ် ။ ၇။ ဒီသန်းခေါင်စာရင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့ပါ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမှာလား? ဟုတ်ကဲ့ - သင်တို့လည်း
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ရပါမယ်။ သန်းခေါင်စာရင်းတစ်ခု ကောက်ပြီဆိုရင်
စာရင်းကောက်မှာပါ။ စစ်တမ်းကောက်သလိုမျိုး နမူနာရွေးချယ်ပြီး ကောက်ယူမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ရပ်ကွက်/ ကျေးရွာအုပ်စု သန်းခေါင်စာရင်း
ရွှေ့ပြောင်းသွားလာမှု ပုံသဏ္ဍာန်များ၊ ပညာရေးအခြေအနေ၊ မသန်စွမ်းသူများ၊ အလုပ်အကိုင်ရရှိမှုအခြေအနေ၊ မွေးဖွားခြင်း၊ သေဆုံးခြင်းနဲ့ ဝန်ဆောင်မှု ရရှိမှု အခြေအနေတို့ကို ရပ်ရွာအဆင့်အထိ ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူခြင်း လုပ်ငန်းကြီးမှာ စာရင်းလာကောက်မဲ့ ဆရာ/ဆရာမများနဲ့အတူ ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်ကြဘို့နဲ့ ပြည့်စုံတိကျမှန်ကန်တဲ့ အချက်အလက်များ ပေးကြဘို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ မှတ်ချက်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှ အတည်ပြုပေးထားတဲ့ သန်းခေါင်စာရင်း ဥပဒေဟာ သင်တို့ကိုအကာအကွယ် ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း နေထိုင်သူ အားလုံးအနေနဲ့ စာရင်းကောက် များမှ မေးမြန်းတဲ့ မေးခွန်းတွေကို ဖြေပေးဖို့
ဤဥပဒေက သင်တ့ေို ပးတဲ့ အချက်အလက်တွေကို လျှုိ့ ဝှက် ထားဖို့ အာမခံ ချက်ပေး ထားပါတယ်။ သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူခဲ့တဲ့ အချက်အလက်တွေကို ရည်ရွယ်
တစ်ဦးချင်းရဲ့ အချက်အလက်တွေကို ရယူနိုင်မှာ မဟုတ်ကြောင်း ပြောကြားလိုပါတယ်။
၈။ ကျွန်ုပ်ရဲ့ အိမ်တံခါးဝကို ရောက်လာသူဟာ သန်းခေါင်စာရင်းရုံးမှ ဖြစ်ကြောင်း ဘယ်လို သိနိုင်သလဲ? သန်းခေါင်စာရင်းလာကောက်တဲ့ စာရင်းကောက်ဖြစ်ကြောင်း အောက်ပါအချက်အလက်များအရ သိနိုင်ပါတယ် (၁) စာရင်းကောက်ဖြစ်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြုကတ်။ (၂) သန်းခေါင်စာရင်းအထိမ်းအမှတ် သင်္ကေတပါသော စာရင်းကောက်ဝတ်စုံ။ (၃) သန်းခေါင်စာရင်းမေးခွန်းများ ကိုင်ဆောင်ထားခြင်း။ (၄) (A3) စက္ကူ အရွယ်ရှိတဲ့ ဒေသမြေပုံတစ်ခုနဲ့ (၅) များသောအားဖြင့် သင်တရ့ို့ဲ ဒေသခံရပ်ရွာ လူကြီးများက စာရင်းကောက်များနဲအ့  တူ လုကိပ်ါပေးတာကို တွေရ့  ပါလိမမ့် ယ်။ စာရင်းကောက်အဖြစ် သင်တို့ရဲ့ ဒေသမှာရှိတဲ့ ကျောင်းဆရာ/ဆရာမများက စာရင်းကောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူတဲ့ လုပ်ငန်းမစခင် ဒေသခံရပ်ကွက်လူကြီးများက စာရင်းကောက်များနဲ့ သင်တို့ကို မိတ်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ၉။ သန်းခေါင်စာရင်းမှာ ဘယ်သူတွေကို ရေတွက်မှာလဲ? ၂၀၁၄ ခုနှစ် မတ်လ (၂၉) ရက်နေ့ညမှာ မြန်မာနိုင်ငံနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ လူအားလုံးကို ရေတွက်မှာ ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံသားမရွေး၊ လူမျိုးမရွေး၊ အသက်အရွယ် အဆင့်အတန်းမရွေး လူတိုင်းကို ရေတွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စာရင်းကောက်ယူရာမှာ
ဆေးရုံများ၊ ဟိုတယ်များ၊ မိဘမဲ့ကျောင်းများ၊ စစ်တန်းလျားများ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းများ စသည်တို့မှာ နေထိုင်သူ အားလုံးကိုလည်း ကောက်ယူမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒုက္ခသည်စခန်း များမှာရှိတဲ့ လူအားလုံးလည်း ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ရာ အတည်တကျ မရှိသူများကိုလည်း သန်းခေါင်စာရင်းမှာ ထည့်ကောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ၁၀။ ကျွန်ုပ်ကို ဒီသန်းခေါင်စာရင်းမှာ ထည့်သွင်း ရေတွက်သွားတယ်လို့ သေချာအောင် သင်တို့ ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ? သန်းခေါင်စာရင်းလုပ်ငန်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကောက်ကွက်တစ်ခု အတွင်းမှာရှိတဲ့ အိမ်ထောင်စုစာရင်းတွေကို ပြန်လည်စစ်ဆေး ရပါမယ်။ ကွင်းဆင်း စာရင်းကောက်တဲ့အခါမှာ ကောက်ကွက်တစ်ခုချင်းမှာ အဲဒီအိမ်ထောင်စုစာရင်းအရ အိမ်ထောင်စုအားလုံးကို ထည့်သွင်းကောက်ယူထားခြင်းရှိ/မရှိ အပြန်အလှန် စစ်ဆေးဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့အိမ်ထောင်စုကို ဧပြီလ (၁၀) ရက်နေ့တိုင်အောင် စာရင်း ကောက်ယူခြင်းမရှိသေးရင် မိမိရပ်ရွာလူကြီးများကို ဆက်သွယ် သင့်ပါတယ်။ ဖုန်းနံပါတ်ကို လွှတ်ပေးပြီး
စာရင်းကောက်ပြီးကြောင်း အမှတ်အသားကတ်ပြားကို သင့်အိမ် တံခါးမှာ ကပ်ထားခဲ့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အသုံးမပြုကြောင်းနဲ့ တာဝန်ရှိသူများက အရေးယူရန်မဟုတ်ကြောင်း ဘယ်လိုလုပ်သိနိုင်မှာလဲ ? ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှ
ကောက်ယူရရှိတဲ့ အချက်အလက်တွေကို ဥပဒေနဲ့အညီ လျှို့ဝှက်ထားရပါမယ်။ ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန
ဆောင်ရွက်ရမယ့် အချက်အလက်များကို မည်သူ့ကိုမျှ အသိပေးမည် မဟုတ်ကြောင်း တရားဝင် လက်မှတ်ထိုးထား ရပါတယ်။ သန်းခေါင်စာရင်း ဥပဒေအရ တာဝန်အရမသက်ဆိုင်သူ အခြား လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းကိုဖြစ်စေ၊ အဖွဲ့အစည်း (အစိုးရဌာနများ အပါအ၀င်) ကိုဖြစ်စေ သန်းခေါင်စာရင်းမှ ကောက်ယူခဲ့တဲ့ တစ်ဦးချင်းရဲ့ အချက်အလက်များကို တောင်းယူပိုင်ခွင့်မရှိပါ။
အခြားအစိုးရအဖွဲအ့  စည်းများမှလည်း
မည်သူတစ်ဦး တစ်ယောက်ရဲ့ အချက်အလက်များကိုမျှ ကြည့်ရှုခွင့်မရှိပါ။ သန်းခေါင်စာရင်းအချက်အလက်များကို စုစည်းပြီး အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြေကြားသူများရဲ့ ကိုယ်ရေးအသေးစိတ်တွေကို ထည့်သွင်း ထုတ်ပြန်မည် မဟုတ်ပါ။ သန်းခေါင်စာရင်းဥပဒေကို ချိုးဖေါက်၍ အပြစ်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရသော စာရင်းကောက်များ (သို့မဟုတ်) ဌာနမှ ၀န်ထမ်းများအား ငွေဒဏ် (သို့မဟုတ်) ထောင်ဒဏ် (သို့မဟုတ်) ပြစ်ဒဏ် (၂) ရပ်လုံး ကျခံရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၂။ ကျွန်ုပ်ရဲ့အမည် အပြည့်အစုံကို ဘာကြောင့်လိုအပ်ပါသလဲ? ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနမှ အိမ်ထောင်စုဝင်အားလုံးရဲ့ အမည်တွေကို မေးရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ “သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူပြီးကြောင်း အမှတ်အသားကပ်ပြား” ကပ်ရတဲ့အကြောင်းက မှန်ကန်မှုကို စစ်ဆေးဘို့ဖြစ်ပါတယ်။ သန်းခေါင်စာရင်းမှာ
ထည့်သွင်းကောက်ယူခြင်းရှိ/မရှိ သေချာစေဖို့ အမည်ကို မေးမြန်းခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အိမ်ထောင်စုကို ပြည့်စုံစွာ စာရင်းကောက်ယူပြီးစီးတဲ့အခါ သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များ (ဥပမာ- အမည်) မေးခွန်းပုံစံနဲ့ အဆောက်အအုံစာရင်းမှာ
လုပ်ပြီးသည်နှင့် တစ်ပြိုင်တည်း အဆိုပါ အချက်အလက်များကိုဘဲ ကွန်ပျူတာထဲကို ထည့်သွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ အမည်ကို ပုံရိပ်ဖမ်းစက်က ဖတ်နိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ နောက်ဆုံးအဆင့် စာရင်းဇယားပြုစုတဲ့အချိန်မှာ အိမ်ထောင်စု များရဲ့ အချက်အလက်တွေကို အမည်မပါဘဲ စာရင်းဇယားများ အဖြစ်သို့ ပြောင်းပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ထုတ်ပြန်မဲ့ အချက်အလက်တွေကနေ အိမ်ထောင်စုတစ်ခု (သို့မဟုတ်) တစ်ဦးချင်းစီကို နောက်ကြောင်းပြန်ပြီး လိုက်ကြည့်နိုင်ခြင်း မရှိပါဘူး။ ၁၃။ သန်းခေါင်စာရင်းမေးခွန်းပုံစံများကို မည်သည့်ဘာသာရပ်များနဲ့ ပြုစုထားပါသလဲ? သန်းခေါင် စာရင်းစာရင်းကောက် ယူရ န်
မေးခွ န်း များကို
မြန် မာဘာသာနဲ့ 
အင်္ဂ လိပ်ဘာသာနဲ့ 
ဒေသခံ ဘာသာစကားကို
ပြုစု ထားပါတယ် ။
ပြောဆိုတ တ် ပါတယ် ။
နိုင်ငြံ ခားသားများကို
စာရင်းကောက် များအနေနဲ့ 
ညွှ န်ြ ကားချက် လ က် စွဲ စာစောင် ထဲမှာ
သင် တို့  ရဲ့
အရေးကြီးတဲ့ 
အချက် အ လက် အ ချို့  ကိုသင် တို့  ရဲ့ ဘာသာစကားနဲ့  ပြုစုပေးမှာဖြစ် တဲ့ အ တွ က်မေးခွ န်း ထဲ မှာ ရှိတဲ့ အချို့  အသုံး အနှု န်း များကိုရှ င်း လင်းပြတဲ့အ ခါ လိုက်ေ လျာညီထွေ မှုရှိ မှာ ဖြစ် ပါတယ် ။
၁၄။ မေးခွန်းပုံစံကို ဖြည့်ဖို့ အချိန်ဘယ်လောက်ကြာပါသလဲ? မေးခွန်းပုံစံကိုဖြည့်ဖို့ ပျမ်းမျှအချိန် (၂၅) မိနစ်ခန့် ကြာနိုင်ပါတယ်။ မတ်လ (၂၉) ရက်နေ့ညမှာ သင့်ရဲ့ အိမ်ထောင်စုမှာ ရှိနေခဲ့တဲ့ လူဦးရေအရေအတွက်ပေါ်မူတည်ပြီး အချိန်အနည်းငယ် အတိုးအလျော့ရှိနိုင်ပါတယ်။ ၁၅။ မေးခွန်းပုံစံကို မိမိကိုယ်တိုင် ဖြည့်နိုင်ပါသလား? မရပါဘူး။ မေးခွ န်း ပုံစံကို မြန်ြ မန် ဆ န် ဆ န် ဖြည့်သွင်း နိုင်ဖို့  အ တွ က်စာရင်းကောက် များကိုအထူးလေ့ ကျင့်သင် တ န်း
လေ့ ကျင့်ေ ပးထားတဲ့ 
စာရင်းကောက် များသာ
မေးခွ န်း ပုံစံများကြို ဖည့်ဖို့ 
သင့်ေ လျာ် ပါတယ် ။ ၁၆။ ကျွန်ုပ်၏ အိမ်ထောင်စုအချက်အလက်များ ဖြည့်ထားတဲ့မေးခွန်းပုံစံကို သန်းခေါင်စာရင်း ရုံးသို့ ကိုယ်တိုင်ပြန်ပို့လို့ ရပါသလား? မရပါဘူး။
စာရင်းကောက်တွေ ကို ယ်တို င်
မေးခွ န်း ပုံစံကို
ပြန် လ ည် အ ပ်နှံရ မှာဖြစ် ပါတယ် ။
သူ တို့  ကို
ပေးထားတဲ့မေးခွ န်း ပုံစံအားလုံး ကိုသူ တို့  ကို ယ်တို င်တာဝန် ယူအပ်နှံရ မှာဖြစ် ပါတယ် ။ ၁၇။ သန်းခေါင်စာရင်း လာကောက်တဲ့ သူတွေကို ကျွန်ုပ်ရဲ့အိမ်ထဲ ဝင်ခွင့်ပေးရမှာလား? အိမ်ထောင်စုတစ်စုကို စာရင်းကောက်ယူဖို့ အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုကြာမှာဖြစ်တဲ့အတွက် စာရင်းကောက် တွေကို ကြိုဆိုလက်ခံပေးဖို့ အားလုံးကို မေတ္တာရပ်ခံလိုပါတယ်။ စာရင်းကောက်တွေဟာ မေးခွန်းပုံစံကို ဖြည့်သွင်းပြီး သင့်အိမ်မှ မထွက်ခွာမီ အချက်အလက်တွေ ပြည့်စုံမှုရှိ/မရှိ ပြန်စစ်ဆေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ ခွင့်မပြုလိုပါက အိမ်အပြင်မှာ ထိုင်ပြီး မေးခွန်းတွေကို ဖြေပေးနိုင်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် စာရင်းကောက်ထိုင်ပြီး စာရင်းရေးသွင်းဖို့နေရာ စီစဉ်ပေးစေလိုပါတယ်။ ၁၈။ မေးခွန်းပုံစံကို အင်တာနက်မှတစ်ဆင့် (online) ဖြည့်ပေးလို့ရပါသလား? မရပါဘူး။
ဖြစ်တဲ့အတွက် မေးခွန်းပုံစံစာရွက်များဖြင့်သာ အိမ်ထောင်စုများကို စာရင်းကောက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉။ မေးခွန်းပုံစံကို ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ် (website) တစ်ခုပေါ်ကနေ ရိုက်ထုတ်ပြီး ကိုယ်တိုင်ဖြည့်လို့ ရပါသလား? မရပါဘူး။ အချက်အလက်တွေကို ပုံရိပ်ဖမ်းရန် (Scan) နဲ့ လွယ်ကူစွာရှာဖွေနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပြီး မေးခွန်းတွေကို သင်္ကေတအမှတ်အသားများ (barcode) ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ ၀က်ဘ်ဆိုက်ဒ် က ရယူထားတဲ့ မေးခွန်းပုံစံတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ၂၀၁၄ခုနှစ်၊ လူဦးရေနှင့်အိမ်အကြောင်းအရာ သန်းခေါင်စာရင်း သိကောင်းစရာများ
barcode များမပါတဲ့အတွက် သန်းခေါင်စာရင်းမေးခွန်း ပုံစံများကို ၀က်ဘ်ဆိုက်ဒ်က ရယူလို့ မရနိုင်ပါဘူး။ barcode များဟာ မေးခွန်းပုံစံများကို
သတ်မှတ်ဒေသများနဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းစနစ်အရ
အချက်အလက်တွေကို ရယူရာမှာ တိကျမှန်ကန်မှုကို အထောက်အကူ ဖြစ်စေပါတယ်။ ၂၀။ ကျွန်ုပ်ဟာ သန်းခေါင်စာရင်း ရည်ညွှန်းချိန်မှာ ဘိုးဘွားရိပ်သာတစ်ခု (သို့မဟုတ်) ဟိုတယ်တစ်ခု (သို့မဟုတ်) အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခုမှာ နေပါက ဘာဖြစ်မလဲ? ယခုကောက်ယူမဲ့
အဖွဲ့အစည်းမေးခွန်းပုံစံ ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်စုမေးခွန်းပုံစံကတော့ သာမန်အိမ်ထောင်စုများအတွက် ဖြစ်ပြီး အဖွဲ့အစည်းမေးခွန်းပုံစံကတော့
ဟိုတယ်များ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းများ အစရှိသည်တို့မှာ အဖွဲ့အစည်းပုံစံနဲ့ နေတဲ့သူတွေအတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်သင့်ကို သင်နေထိုင်တဲ့နေရာပေါ် မူတည်ပြီး စာရင်းကောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၁။ ကျွန်ုပ်သည် ယာယီကယ်ဆယ်ရေးစခန်းမှာ ရောက်ရှိနေသည်ဆိုပါစို့။ ကျွန်ုပ်ကို သန်းခေါင်စာရင်းမှာ ထည့်ကောက်မှာ ပါလား? ဟုတ်ကဲ့၊ ထည့်ကောက်မှာပါ။ သန်းခေါင်စာရင်းညမှာ မြန်မာ့နယ်နိမိတ် အတွင်းရှိသူ အားလုံး (ကယ်ဆယ်ရေး စခန်းတွင် ရောက်ရှိနေသူများ အပါအဝင်)ကို စာရင်းကောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ လူအားလုံးကို လွှမ်းခြုံကောက်ယူနိုင်ဖို့အတွက်
ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၂။ မတ်လ (၂၉) ရက်နေ့ညမှာ ကျွန်တော်/ကျွန်မ ဒီနိုင်ငံပြင်ပမှာ ရှိနေပါမယ်။ ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်/ကျွန်မကို သန်းခေါင်စာရင်းမှာ ထည့်ကောက်မှာလား? ဟုတ်ကဲ့၊ သန်းခေါင်စာရင်းညမှာ ပြည်ပကိုရောက်နေတဲ့ အိမ်ထောင်စုဝင်တွေရဲ့ အချက်အလက်တွေကိုလည်း ကောက်ယူမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်ပနိုင်ငံကို တရားဝင် သွားသည်ဖြစ်စေ၊ မသွားသည်ဖြစ်စေ ထည့်သွင်းစာရင်းယူမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၃။ မတ်လ(၂၉) ရက်နေ့ညတွင် ကျွန်ုပ်၏အိမ်မှာ ဧည့်သည်များရှိနေခဲ့ရင် သူတို့ကို ကျွန်ုပ်ရဲ့ အိမ်ထောင်စုမှာ ထည့်ပြီး ရေတွက်မှာပါလား? မတ် လ (၂၉) ရက်နေ့ ည မှာမည် သူမ ဆိုသင် ၏ အိ မ်မှာ အိ ပ်ခဲ့ ရ င် သူ တို့  ကို သင့်ရဲ့ အိ မ်ေ ထာင် စုမှာ ထည့်သွင်း ကောက် ယူမှာ ဖြစ် ပါတယ် ။ မတ် လ (၂၉) ရက်နေ့ ည မှာအလု ပ်လုပ်ေ နသူတွေ ၊ လမ်းခရီးမှာရှိေ နသူတွေ ၊ ပွဲတ က်နေသူတွေ မတ် လ (၃၀)ရက်နေ့ မှာ ၎င်းတို့ အိမ်ကို ပြန်ရောက် လာလျှင် ၎င်းတို့ ကို သက် ဆို င်ရာအိ မ်ေ ထာင် စုများမှာဘဲ ထည့်ေ ကာက် မှာ ဖြစ် တ ယ် ။ ၂၄။
သူနေအမြဲနေထိုင်ခဲ့တဲ့ နေရာမှာ သူ့ကို ထည့်ကောက်/မကောက် ဘယ်လိုသိနိုင်မှာလဲ? မတ်လ (၂၉) ရက်နေ့ညမှာ လူများအိမ်ထောင်စုမှာ ရှိ/မရှိ သေချာအောင် မေးမြန်းပြီးမှ အဲဒီ လူတွေကို စာရင်းကောက်ဖို့ စာရင်းကောက်တွေကို လေ့ကျင့်ပေးထားပါတယ်။ တကယ်လို့ မတ်လ (၂၉) ရက်နေ့ညမှာ သူ့အိမ်ထောင်စုမှာ မရှိရင် သူ့ကို စာရင်းကောက်ယူမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
၂၅။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည် နိုင်ငံခြားသားဖြစ်လျှင်၊ ကျွန်ုပ်ကို သန်းခေါင်စာရင်းမှာ ထည့်ကောက်မှာပါလား? ဟု တ်ကဲ့ ၊ နိုင်ငံသားဖြစ်စေ/နိုင်ငြံ ခားသားဖြစ်စေ၊ မြန် မာနိုင်ငံနယ် နိမိတ်အ တွ င်း အိ မ်ေ ထာင် စု(သို့ မ ဟု တ်) အဖွဲ့ အ စည်း
(သို့ မ ဟု တ်)
ယာယီ က ယ် ဆ ယ်ရေးစခန်းများမှာ
နေသူ အားလုံး ကို
သန်းခေါင် စာရင်းမှာ
ထည့်ေ ကာက် မှာ ဖြစ် ပါတယ် ။ ၂၆။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်သန်းခေါင်စာရင်းရဲ့ ရလဒ်တွေကို ပြည်သူလူထုထံ ဘယ်တော့လောက် ထုတ်ပြန်ကြေငြာ မှာလဲ? သန်းခေါင် စာရင်းရဲ့  နောက် ဆုံးရလဒ်တွေ က တော့ ၂၀၁၅ ခုနှ စ်ပထမလေးလပတ် မှာ ထု တ်ြ ပန် မှာ ဖြစ်ြ ပီးအကြိုရလဒ်တွေ ကိုတော့ ၂၀၁၄ ခုနှ စ်သြဂု တ်လ မှာသိ ရှိ ရ မှာဖြစ် ပါတယ် ။ ၂၇။ သန်းခေါင်စာရင်းရလဒ်တွေကို ထုတ်ပြန်ဖို့ ဘာဖြစ်လို့ ဒီလောက်တောင် အချိန်ယူရပါသလဲ? ခန့်  မှန်း ခြေအိ မ်ေ ထာင် စုေ ပါင်း
သန်းခန့်  ဆီက
လူ တ စ် ဦး ချင်းရဲ့ 
အချက် အ လက်တွေ ကို
ကောက် ယူမှာ ဖြစ် ပါတယ် ။ ဒီ အ ချက် အ လက်တွေ ကို စု စ ည်းဖို့ နဲ့ စာရင်းဇယားပြုစု ဖို့  အချိ န်များစွာလိုပါတယ် ။ ပြီးရင် အ ချက် အ လက်တွေ ကို ဆန်းစစ်ြ ခင်း၊ သုံး သပ်လေ့ လာခြင်းများ ပြုလု ပ်ြ ပီးအများပြည် သူအလွ ယ်တ ကူ နားလည်နိုင်မဲ့ ပုံစံနဲ့ ထု တ်ြ ပန်ကြေငြာရမှာဖြစ် လို့  အချိ န်ယူရ တာ ဖြစ် ပါတယ် ။ ၂၈။ တရားဝင်မဟုတ်ဘဲ ဝင်ရောက်လာတဲ့သူတွေကိုလည်း စာရင်းကောက်မှာပါလား? ဟု တ်ကဲ့ ၊ မတ် လ (၂၉)ရက်နေ့ ည မှာမြန် မာနိုင်ငံန ယ် နိ မိတ်အ တွ င်း ရှိေ နသူ အားလုံး ကိုတရားဝင် သ ည် ဖြစ်စေ၊ မဝင် သ ည်ြ ဖစ်စေ ထည့်သွင်း စာရင်းကောက် ယူမှာ ဖြစ် ပါတယ် ။ ၂၉။
အကောက်ခံလို့ရမလား? တာဝန် ကျတဲ့စာရင်းကောက် နဲ့ သန်းခေါင် စာရင်းပုံစံပါမေးခွ န်း တွေ ကို ဖြေပေးချင် တဲ့ ဆန္ဒ မ ရှိဘူး ဆိုရ င် စာရင်းစစ် နဲ့ ဆက် သွယ်ြ ပီးအကူ အ ညီတောင်းခံနိုင်ပါတယ် ။ ၃၀။ ကျွန်ုပ်အိမ်မှာနေတဲ့ အိမ်မှုကိစ္စလုပ်တဲ့ အလုပ်သမား ရှိပါတယ်။ သူ့ကို ကျွန်ုပ်ရဲ့ အိမ်ထောင်စုမှာ စာရင်းကောက်မှာပါလား? အဲ ဒါအခြေအနေပေါ် မူ တ ည် ပါတယ် ။ အကယ် ၍ သူ သ ည် သင့်အိမ်ေ ထာင် စုမှာ ဘဲနေပြီးသင် တို့  နဲ့ အတူ စားမယ် ဆို လျှ င် သူ ဟာသင့်ရဲ့ အိ မ်ေ ထာင် စုဝ င် တ စ် ဦး ဖြစ် တဲ့ အ တွ က်သူ့  ကို သင် ရဲ့ အိ မ်ေ ထာင် စုမှာ စာရင်းကောက် ပါမယ် ။ အကယ် ၍ သူ / သူ မ သည် သီးခြားနေရာ တစ် ခုမှာ နေထိုင်ြ ပီးသူ့  အ စီ အ စဉ် နဲ့ ချက်ြ ပုတ် စားမယ် ဆို ရ င်တော့ သီးခြားအိ မ်ေ ထာင် စုအ ဖြစ် သတ် မှတ်ြ ပီးသူ့  ကို သီးခြားကောက် ယူမှာ ဖြစ် ပါတယ် ။ ၃၁။ ဘာကြောင့် ကျား/မနဲ့ပတ်သက်တဲ့ မေးခွန်းကိုမေးပြီး ဒီနေ့ခေတ်မှာ ရေပန်းစားနေတဲ့ ကျားမ လူမှုရေးရာ (Gender)ကို ဘာကြောင့် မမေးတာပါလဲ? ကျား/မသည် ယောက်ျားများနဲ့ မိန်းမများအကြား ဇီဝဗေဒအရ ခွဲခြားတာမို့ ကျား/မ ဟာ ပိုပြီး သိပ္ပံနည်းကျတဲ့ အဓိပ္ပါယ် သတ်မှတ်ချက် ဖြစ်ပါတယ်။ Gender လို့ခေါ်တဲ့ ကျားမလူမှုရေးရာ ကျတော့ ယောက်ျားများနဲ့ မိန်းမများအကြား လူမှုရေးအရ ခွဲခြားထားခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ၂၀၁၄ခုနှစ်၊ လူဦးရေနှင့်အိမ်အကြောင်းအရာ သန်းခေါင်စာရင်း သိကောင်းစရာများ
၃၂။ လူမျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ မေးခွန်းများကို ဘာကြောင့်မေးရပါသလဲ? လူ မျိုးနွ ယ်တ စ် စုချင်းရဲ့  လူ ဦး ရေအကြောင်းအရာများကိုလေ့ လာဖို့ အ တွ က်လူ မျိုးမေးခွ န်း ကိုမေးလေ့ ရှိ ပါတယ် ။
မြန် မာနိုင်ငံထဲမှာ
ဘယ် လူမျိုးတွေနေထိုင်တ ယ် ၊
ဘယ် လို
ကြွဲ ပားခြားနားတယ်
ဆိုတာကို
သိ ဖို့  လို အ ပ် သ လိုမျိုးနွ ယ်စုများ၏ လိုအ ပ် ချက် များကိုလ ည်းဖော် ထုတ်ေ ပးနိုင်ရ န် အရေးကြီးပါတယ် ။ မြန် မာနိုင်ငံသ န်းခေါင် စာရင်းမှာလူ မျိုးမေးခွ န်း ကိုစာရင်းအင်းကိ စ္စ အ တွ က်သာရည် ရွယ်ြ ပီးမေးခြင်းဖြစ် ပါတယ် ။ လူ မျိုးမေးခွ န်း နှ င့် ပတ် သ က်ြ ပီးမည် သူမ ဆိုမိ မိလူမျိုးရဲ့  အမည် ကို ကိုယ်တို င်ထု တ်ေ ဖာ် ပြောခွ င့် ပြုထားပါတယ် ။ လူ မျိုးကြီး(၈)မျိုးနဲ့  လူ မျိုးစု (၁၃၅) စု ကိုတော့ ဂဏန်းသင်္ကေ တ များ ပေးထားပြီးအဲ ဒီ(၁၃၅)မျိုးထဲ မှာ မပါရင် “အခြား” ဆိုတဲ့ ဂဏန်းသင်္ကေ တ ကိုရွေးပြီးဖြေဆိုသူမှပြောကြားတဲ့လူ မျိုးအမည် ကို ကွ က်လ ပ် မှာ ရေးသွ င်း မှာဖြစ် ပါတယ် ။ ၃၃။ ကျွန်တော်/ကျွန်မ တို့ရဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ မေးခွန်းတွေကို ဘာလို့မေးတာပါလဲ? လူနေမှုအဆင့်အတန်းကို သိရှိရန်နဲ့ စီးပွားရေးနဲ့ လူမှုရေးအညွှန်းကိန်းများ ပြုစုဖို့ (ဥပမာ- လူနေမှု အဆင့်အတန်း အညွှန်းကိန်း) မေးမြန်းခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ၃၄။ မသန် စွမ်း သူ နဲ့ ပ တ် သ က် တဲ့မေးခွ န်း ကိုမည် သ ည့်အ တွ က်ေ ကြာင့်မေးရပါသလဲ ? မသန်စွမ်းမှုအဆင့်တွေကို
အချက်အလက်တွေဟာ အရေးကြီးပါတယ်။ အဲဒီအချက်အလက်တွေကနေ သူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေး လိုအပ်ချက်များနဲ့ အခြေခံဝန်ဆောင်မှု လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၃၅။
ကောက်မှာလဲ? အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်တဲ့ အကျဉ်းထောင်၊ ဆေးရုံနဲ့ ဟိုတယ် အစရှိသည်တို့မှာ
ထမ်းဆောင်နေတဲ့သူတွေကိုပဲ စာရင်းကောက်အဖြစ် တာဝန်ပေးအပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စာရင်းကောက်များလိုအပ်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို တာဝန်ရှိသူတွေက ပံ့ပိုးပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဟိုတယ်လို အဖွဲ့အစည်း နေရာမျိုးမှာဆိုရင်
ရှိနေတဲ့သူတွေကို စာရင်းကောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဖွဲ့အစည်းအတွက် ပြုစုထားတဲ့ မေးခွန်းပုံစံကို အသုံးပြုပြီး အချက်အလက်တွေကို စာရင်းကောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ၃၆။ မည် သ ည့်ေ မးခွ န်း များ မေးမှာပါလဲ ? သန်းခေါင်စာရင်းမေးခွန်းပုံစံမှာ လူဦးရေဆိုင်ရာ မေးခွန်းများဖြစ်တဲ့ ကျား/မ၊ အသက်၊ အိမ်ထောင်ရေး အခြေအနေ၊ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ၊ လူမျိုး၊ အစရှိသည့်မေးခွန်းများ၊ နေမြဲအရပ်၊ ပြောင်းရွှေ့ခြင်းစသည့် ပြောင်းရွှေ့သွားလာခြင်းဆိုင်ရာ
အလုပ်လုပ်ကိုင်မှု၊ မွေးဖွားခြင်း၊ သေဆုံးခြင်းနဲ့ ဝန်ဆောင်မှုများရရှိမှု အခြေအနေစတဲ့ မေးခွန်းတွေကို မေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၃၇။ အကယ်၍ ကျွန်တော်/ကျွန်မသည် သန်းခေါင်စာရင်းညမှာ ခရီးထွက်နေရင် (ဒါမှမဟုတ်) လူမှုရေးကိစ္စတစ်ခုနဲ့ အပြင်ရောက်နေရင် ဘာဖြစ်မလဲ? ကျွန်တော်/ကျွန်မကို ဘယ်မှာစာရင်း ကောက်မှာပါလဲ? မတ် လ (၃၀)ရက်နေ့ မှာ သင် အ မြဲနေထိုင်တဲ့နေရာ(သင့်အိမ်) ကိုပြန်ရောက်နေပြီးတစ်ြ ခားနေရာ(ဟိုတ ယ်
သို့ မ ဟု တ်တစ် ဦး ဦးရဲ့  အိ မ်) မှာမအိ ပ်ခဲ့ ရ င် သင့်ကို သင့်ရဲ့ အမြဲနေထိုင်ရာဒေသမှာဘဲ စာရင်းကောက် မှာ ဖြစ် ပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့သင် ဟာမတ် လ (၂၉)ရက်နေ့ မွ န်း လွဲအချိ န်မှာ မန္တလေးကနေ ရန် ကုန်ကို (လမ်းခရီးမှာလုံး ဝမအိ ပ်ဘဲ) တောက်လျှောက် လာပြီးရန် ကုန်ကို မတ် လ (၃၀)ရက်နေ့ မှာ ရောက် လာတယ် ဆို ရ င် သင် ဟာ
သန်းခေါင် စာရင်းညမှာ
သင့်ေ နအိ မ်ရှိ ရာ
မန္တလေးမှာ
ရှိေ နတဲ့သ ဘော
ဖြစ် တဲ့ အ တွ က်
သင့်ကို မန္တလေးနေအိ မ်မှာ ဘဲ စာရင်းကောက် မှာ ဖြစ် ပါတယ် ။ သာမန် အားဖြင့်သန်းခေါင် စာရင်းညမှာခရီးထွ က်တဲ့ သူကို သူ တို့  ခ ရီးစထွ က်တဲ့ နေရာမှာကောက် ယူမှာ ဖြစ် ပါတယ် ။ ၃၈။ သန်းခေါင်စာရင်းကို မတ်လ (၃၀)ရက်နေ့မှာ စပြီး စာရင်းကောက်မယ်လို့ သိထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သန်းခေါင် စာရင်းကောက်ဖို့ဆိုပြီး လူတစ်ယောက် လာသွားပါတယ်။ အဲဒီလူဟာ တရားဝင်တာဝန် ပေးထားတဲ့သူ ဟုတ်ပါ သလား? သန်းခေါင် စာရင်းစတင် မကောက် ယူမီသန်းခေါင် စာရင်းရုံး ဟာ အဆောက် အ အုံစာရင်းကိုပြုစု ရ ပါတယ် ။ ဒီ စာရင်းကတော့ မြေပြင် မှာ ရှိတဲ့ အဆောက် အ အုံများနဲ့  နေထိုင်တဲ့နေရာတွေ ဖြစ် ပါတယ် ။ စာရင်းကောက် များကိုစာရင်းကောက် ယူဖို့  နေရာသတ် မှတ်တာဝန်ပေးတဲ့စာရင်းဖြစ် ပါတယ် ။ တစ် အိမ်တ က် ဆ င်းစာရင်းကောက် တဲ့ အ ခါမှာလည်း
လူ ကျန် ရ စ် ခဲ့ြ ခင်းမရှိေ အာင်
အထောက် အ ကူပေးတဲ့ 
စာရင်းလည်း
ဖြစ် ပါတယ် ။ စာရင်းကောက် ယြူ ခင်းလု ပ်င န်းကိုဆောင် ရွက်ဖို့  အ တွ က်အဆိုပါစာရင်းများကိုကြိုတင် ပြင် ဆ င် ထားရပါတယ် ။ ၃၉။ မတ် လ (၂၉) ရက်နေ့ က ကျွန်တော် / ကျွန် မ အိ မ်မှာ ရှိေ နပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့(၃၀)ရက်နေ့ မနက် မှာ ခရီးထွ က်ရ မှာဖြစ်ြ ပီးသန်းခေါင် စာရင်းကောက် တဲ့ နောက် ဆုံးရက်ြ ဖစ် တဲ့ ဧပြီ လ (၁၀)ရက်နေ့ကျော် မှအိ မ်ကိုြ ပန်ရောက် မှာ ဖြစ် ပါတယ် ။ ကျွန်တော် / ကျွန် မ ကိုသန်းခေါင် စာရင်းထဲ မှာ ပါဖို့ ဘယ် လို လု ပ်ရ မှာပါလဲ ? ကျေးရွာလူကြီး
မထွက်ခွါမီ သင့်အိမ်ကို စာရင်းကောက်တစ်ယောက် စေလွှတ်ပေးပြီး စာရင်းကောက်ဖို့ ဆောင်ရွက်ပေး ပါလိမ့်မယ်။ ၄၀။ သန်းခေါင်စာရင်းနဲ့ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ ပြုလုပ်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲများ ဘာတွေပတ်သက် ဆက်စပ်မှု ရှိပါသလဲ? သန်းခေါင်စာရင်းနဲ့
သန်းခေါင်စာရင်း ကနေ နိုင်ငံရဲ့လူဦးရေကို ကျား/မ နဲ့ အသက်အပိုင်းအခြား အလိုက်ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ယင်းအချက်အလက်တွေကို ဥပဒေအရ လျှို့ဝှက်ထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာ လူတစ်ယောက်ဟာ မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကို
မဲဆန္ဒရှင်များအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ရန် ရရှိနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၊
သန်းခေါင်စာရင်းမှ ရရှိတဲ့ စာရင်းအင်းများကိုသာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အသက် (၁၈)နှစ်နဲ့အထက် စုစုပေါင်းလူဦးရေဟာ
အကယ်၍ အုပ်ချုပ်မှုဒေသ တစ်ခုရဲ့
မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ မဲဆန္ဒရှင်အရေအတွက်နဲ့ ကိုက်ညီမှု ရှိ/မရှိ
ဆန်းစစ်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ဤနည်းဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မဲပေးနိုင်ခွင့် ရှိသူတိုင်း မှတ်ပုံတင်ထားခြင်း ရှိ/မရှိ ဆန်းစစ်ရာမှာ အထောက်အကူပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၄၁။ သန်းခေါင်စာရင်းနဲ့ အိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်း ဘယ်လို ဆက်စပ်မှုရှိပါသလဲ? သန်းခေါင် စာရင်းနဲ့  အိ မ်ေ ထာင် စုလူဦး ရေစာရင်းလုံး ဝဆက် စ ပ် မှုမရှိပါ။ သန်းခေါင် စာရင်းဟာ နိုင်ငံ့ အ တွ က်လိုအ ပ် တဲ့ မှ န်က န် တဲ့ လူ ဦး ရေသတင်းအချက် အ လက် များနဲ့  ပြည် သူလူထုရဲ့ လိုအ ပ် ချက် များကိုသိ ရှိနိုင်ဖို့  စာရင်းကောက် ယူတဲ့
လု ပ်င န်းတစ် ခြု ဖစ် ပါတယ် ။
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအားလုံး နီးပါးတွ င်
သန်းခေါင် စာရင်း
ကောက် ယူေ လ့ ရြှိ ကပါတယ် ။ စာရင်းကောက် များ သင် တို့  အိမ်ကို လာတဲ့အ ခါ အိ မ်ေ ထာင် စုလူဦး ရေစာရင်းကိုတောင်းကြည့်လိမ့် မ ည် မဟု တ်ပါ။
စာရင်းကောက်တွေ က ၂၀၁၄ ခုနှ စ်မတ် လ (၂၉)ရက်နေ့ ည မှာသင့်အိမ်မှာ ဘယ် သူေ တွ
ရှိေ နတယ် ဆိုတာကိုဘဲမေးမြန်းမှာဖြစ် ပါတယ် ။ ဤသို့ ဆောင် ရွက်ြ ခင်းဖြင့်သတ် မှတ်ရ က် မှာ ရှိတဲ့ နိုင်ငံရဲ့ လူ ဦး ရေကိုရ ရှိမှာ
ဖြစ် ပါတယ် ။
သန်းခေါင် စာရင်းတစ် ခုဆို တာ
နိုင်ငံတ စ်နိုင်ငံရဲ့
လူ ဦး ရေကို
လျှပ် တ စ်ြ ပက် ဓါတ် ပုံ ရို က်ယြူ ခင်းနဲ့  တူ ပါတယ် ။ ၄၂။ အချို့  ပဋိ ပ က္ခဒေသတွေ ဆို ရ င် စာရင်းကောက်တွေ ဘယ် လို စာရင်းကောက် မှာ ပါလဲ ? ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဧပြီလ သန်းခေါင်စာရင်း စကောက်တဲ့အချိန်မှာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီမှုတွေ ရရှိနိုင်မည်ဟု တာဝန်ရှိသူများက ယုံကြည်မျှော်မှန်းထားကြပါတယ်။ ယနေ့အထိ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန
သန်းခေါင်စာရင်းအကြောင်း ရှင်းလင်းဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်လျက် ရှိပါတယ်။ ပဋိပက္ခဒေသများ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း ခေါင်းဆောင်တော်တော်များများကလည်း လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် သန်းခေါင်စာရင်းဟာ အရေးကြီးကြောင်း နားလည်သဘောပေါက်ကြတဲ့အတွက် ပူးပေါင်းပါဝင်ရန် စိတ်အားထက်သန်လျက်ရှိကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောနေကြပါတယ်။ သန်းခေါင်စာရင်းမှာ
ဖွဲ့စည်းပုံမှာ လူမျိုးစုအားလုံးနဲ့ အရပ်ဖက်လူမှုရေးအဖွဲ့များရဲ့ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုရှိအောင် ဆောင်ရွက်ထားပါတယ်။
လူ မျိုးစု များကို သူတို့ န ယ်ေ ဒသအတွင်းမှာစာရင်းကောက် များအဖြစ် တာဝန် ယူပေးဖို့ တောင်း ဆိုမှာ ဖြစ် ပါတယ်။
သန်းခေါင်စာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး လူထုအသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များကို ရေးဆွဲပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်များကို ပြည်သူလူထုမှ ပူးပေါင်းပါဝင် လာစေဖို့နဲ့ သန်းခေါင်စာရင်းဟာ အားလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်မှုရှိကြောင်း သိရှိခံစားလာစေရန် တတ်နိုင်သမျှ တိုင်းရင်းသား ဘာသာစကားများဖြင့် မကြာခင် ထုတ်ပြန်နိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ သန်းခေါင် စာရင်း အကောက်ခံဖို့ လူတိုင်းမှာ အခွင့်အရေးရှိသလို တိကျမှန်ကန်တဲ့ အချက်အလက်များ ပေးဖို့ကိုလည်း တာဝန်ရှိကြောင်း ပြည်သူလူထုက သိထားသင့်ပါတယ်။
မြို့နယ်အဆင့် သန်းခေါင်စာရင်းကော်မတီမှာ လူထုအဖွဲ့အစည်း အသီးသီးမှ ပုဂ္ဂိုလ်များပါဝင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်လူဦးရေနှင့်အိမ်အကြောင်းအရာ မေးခွန်းတွင် မေးမြန်းမည့် မေးခွန်း (၄၁) ချက် လူ တို င်း ကိုမေးရန် ၁။ ၂။ ၃။ ၄။ ၅။ ၆။ ၇။ ၈။
အမည် အိ မ်ေ ထာင် ဦး စီးနှ င့် တော် စ ပ် ပုံ ကျား/မ ပြည့်ြ ပီးအသက် အိ မ်ေ ထာင်ရေး အခြေအနေ ကိုး ကွ ယ်သ ည့်ဘာသာ လူ မျိုးမသန် စွမ်း မှု အခြေအနေ (အမြင် ၊ အကြား၊ ကိုယ်လ က် လှုပ်ရှားမှု တွင်အခက် အ ခဲ ရှိြ ခင်း၊ မှ တ်ဉာဏ် ချို့  ယွ င်း ခြင်း) ၉။ ကိုင်ေ ဆာင် သ ည့်လက် မှတ်အ မျိုးအစား ၁၀။ မွေးဖွားရာ ဇာတိ ၁၁။ နေမြဲ အရပ် (မြို့/ကျေးလက် ) ၁၂။ နေမြဲ အ ရပ် တွင်နေထိုင်သ ည့်ကာလ ၁၃။ ဒေသတစ် ခုမှအခြားဒေသတစ် ခုသို့  ရွှေ့  ပြောင်းလာရသည့်အကြောင်းရင်း၁၄။ နေမြဲ အ ရပ် သို့  ပြောင်းမလာခင် နောက် ဆုံးနေထိုင်ခဲ့ သ ည့်ဒေသ (မြို့  /ကျေးလက် ) ၁၅။ စာတတ်မြောက် မှုအ ခြေအနေ (မည် သ ည့်ဘာသာစကားနှ င့် မ ဆို) ၁၆။ လက် ရှိ အ တန်းပညာသင်ြ ကားမှု အခြေအနေ ၁၇။ အမြင့်ဆုံးအောင်ြ မင် ခဲ့ သ ည့်အတန်း၁၈။ လွ န်ခဲ့သော ၁၂လ အတွ င်း လု ပ်ကို င်ခဲ့ သ ည့်အလု ပ်အ ကိုင်အ မျိုးအစား ၁၉။ အဓိ က အလု ပ်အ ကိုင်၂၀။ လု ပ်င န်း- လု ပ်ကို င်သ ည့်လု ပ်င န်းအဖွဲ့ အ စည်းနှ င့် အမည် အိ မ်ေ ထာင် ကျဘူးသူ အမျိုးသမီးတိုင်း ကိုမေးမြန်းရန် မေးခွ န်း များ ၂၁။ ၂၂။ ၂၃။ ၂၄။
စု စုေ ပါင်းမွေးဖွားခဲ့သ ည့်ကလေးအရေအတွ က်အသက် ရှင်လျက် ရှိသော ကလေးအရေအတွ က်သေဆုံး သွားသော ကလေးအရေအတွ က်နောက် ဆုံးမွေးကလေးနှ င့် ပတ် သ က် သ ည့်အ ကြောင်းအရာများ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ၂၀၁၄ခုနှစ်၊ လူဦးရေနှင့်အိမ်အကြောင်းအရာ သန်းခေါင်စာရင်း သိကောင်းစရာများ
အိ မ်အ ကြောင်းအရာနှ င့် သက် ဆို င်သ ည့်ေ မးခွ န်း များ ၂၅။ နေအိ မ်အ မျိုးအစား ၂၆။ အိ မ်ပို င်ဆို င်မှုအခြေအနေ ၂၇။ အလင်းရောင် အ တွ က်အဓိ က သုံး စွဲမ ည့်မီးအမျိုးအစား ၂၈။ သောက် / သုံး ရေအတွ က်အဓိ က ရေရရှိမှုအခြေအနေ ၂၉။ အစားအစာ ချက်ြ ပုတ် ရ န် အ တွ က်အဓိ က လောင် စာအမျိုးအစား ၃၀။ အိ မ်သာအမျိုးအစား ၃၁။ နေအိ မ်အဆောက် အ အုံတွင်အဓိ က အသုံး ပြုသည့်ပ စ္စ ည်း များ (အမိုး ၊ အကာ၊ အခင်း) ၃၂။ အိမ်ေထာင်စတုငွရ်သှိ ည့် ပစ္စည်း အမျိုးအစား (ရေဒီယ၊ိုရုပြ် မင်သြံ ကား၊ ကြိုးဖုန်း ၊ လက်ကငို ဖ်နုး ၊ ကွနပ်ျူတာ၊ အိမတ်ငွ် အင်တာနက် တပ်ဆင်ထားခြင်း၊ ကား (ပစ်ကပ်/ဗင်န/် ထရပ်ကား)၊ မော်တော်ဆငို က်ယ်/သံုး ဘီးကား၊ စက်ဘီး ၊ ထွနစ်က်၊ မော်တော်ဘတု၊် လှည်း (နွား/ကျွ/ဲ မြင်း)) အိ မ်ေ ထာင် စုသားများထဲ မှနိုင်ငြံ ခားသို့ ရောက် ရှိနေသူ များ ၃၃။ ၃၄။ ၃၅။ ၃၆။ ၃၇။
အမည် ပြည့်ြ ပီးအသက် ကျား/မ ထွ က်ခွာ သည့်ခုနှ စ်ရောက် ရှိနေထိုင်သ ည့်နိုင်ငံ
လွ န်ခဲ့သော ၁၂လအတွ င်း အိ မ်ေ ထာင် စုသားများထဲ မှသေဆုံး ခြင်းအကြောင်းအရာ ၃၈။ ၃၉။ ၄၀။ ၄၁။
အမည် ကျား/မ သေဆုံး စဉ် အသက် သေဆုံး သူ သ ည် အမျိုးသမီးအသက် (၁၅-၄၉)နှ စ်အ တွ င်း ဖြစ် ပါက ကိုယ်ဝ န်ကြောင့်သေဆုံး ခြင်း/ မွေးဖွားစဉ် သေဆုံး ခြင်း/ ကလေးမွေးဖွားပြီး၆ ပတ် အ တွ င်း သေဆုံး ခြင်းဟု တ်မ ဟု တ်မေးမြန်းရန်
To ﬁnd out more information visit: www.dop.gov.mm အသေးစိ တ် သိရှိလိုပါက ... http://myanmar.unfpa.org/census www.dop.gov.mm Email: mmrcensus.group@unfpa.org http://myanmar.unfpa.org/census
Unfpa qna mm